Telesom Magazine (281 views)
Uploaded by Mustafe Adam
Telesom Magazine, Issue 14
saveSave Telesom Magazine For Later
Telesom Newsletter, April—June 2012, Tirsiga 14aad
Shirkadda Telesom Oo Jaamacadda Har- gaysa, kuuliyadda ICT-ga U dhistay dhisme cusub oo qalabaysan
Telesom oo $25,000 ugu deeqay dhismaha waddooyinka ee degmada Tog-wajaale
Telesom oo $20,000 Ku Wareejisay Guddida Dhismaha Wadda Dawga Cad
Telesom Oo Gaadhi guddoonsiisay Jaamacadda Nugaal (Laascaanood)
Telesom oo lacago ugu deeqday dhismaha waddooyinka xaafaddaha Jameeco weyn, Jigjiga yar iyo Sh. Nuur ee Hargeysa
Telesom oo Magaalada Berbera ku guddoon- siisay 41 Arday Muraayadaha Indhaha
Daahfurka Diiwaankii Maansooyinka Ab- waan Timacade oo Af-Ingiriisi lagu qoray
Baro mid ka mid ah hormuudka Shaqaalaha Telesom
Zeko Sooc: Waa maxay Seko?
Sidee Sidee ayuu ku yimaadaa Cudurka Faalijku?
Adeegyadda Cusub ee Sanadkan 2012 Telesom Soo kordhisay
Mustafe A. Muse Editor-in-Chief
Waxa farxad weyn noo
dhoweyno tirsigii 14aad ee majaladda Telesom
biloodba hal mar soo baxda (Quarterly), waxa soo
ahaan xafiiska Xidhiidhka Dadweynaha (Public Rela- tions office).
Majaladan waxa aad ka heli kartaa maqaalo xiiso leh oo isugu jira dhacdooyinka iyo wararka Telesom,
Adeegyo cusub oo faa’iido u leh macaamiisha,
barnaamijyo caafimaad, Suugaan, Dhaqan iyo barnaamijyo kale oo aqooneed.
Wixii macluumaad ama qoraalo faa’iido u leh dalka iyo
bulshadaba waxa aad noogu soo hagaajisaan xafiiska Xidhiidhka dadweynaha ee Telesom oo ku yaala xa- runta dhexe ee Salaam Remittance ama ku soo dir ciwaanka:
Telesom Tower, Bridge Road, Hargeisa Somaliland, Office: +252 2 522168, Email: pr@telesom.net, kibaaro@telesom.net
kibaaro@telesom.net Mohamed Ibrahim Assistant Editor GUDDIDA TIFAFTIRKA 1. C/Salaam Ismaaciil: Madaxa Waaxda Horumarinta Ganacsiga 2. Eng. Faarax Sugaal: Madaxa Waaxda Maamulka 3. C/Wahaab Maax: Madaxa Waaxda Ga- nacisga 4. Yaxye Iid: Madaxa Qaybta Suuqgeynta & xidhiidka dadweynaha 5. Cadnaan Daahir: Madaxa Qaybta Xidhiidhka Caalamiga 6. Maxamed Cabdi (Darbo): Ku-xigeenka Qaybta Suuqgeynta & Xidhiidhka dad- weynaha Telesom Newsletter, April — June 2012, Tirsiga 14aad " id="pdf-obj-2-70" src="pdf-obj-2-70.jpg">
1. C/Salaam Ismaaciil: Madaxa Waaxda Horumarinta Ganacsiga
2. Eng. Faarax Sugaal: Madaxa Waaxda Maamulka
3. C/Wahaab Maax: Madaxa Waaxda Ga- nacisga
4. Yaxye Iid: Madaxa Qaybta Suuqgeynta & xidhiidka dadweynaha
5. Cadnaan Daahir: Madaxa Qaybta Xidhiidhka Caalamiga
6. Maxamed Cabdi (Darbo): Ku-xigeenka Qaybta Suuqgeynta & Xidhiidhka dad- weynaha
kibaaro@telesom.net Mohamed Ibrahim Assistant Editor GUDDIDA TIFAFTIRKA 1. C/Salaam Ismaaciil: Madaxa Waaxda Horumarinta Ganacsiga 2. Eng. Faarax Sugaal: Madaxa Waaxda Maamulka 3. C/Wahaab Maax: Madaxa Waaxda Ga- nacisga 4. Yaxye Iid: Madaxa Qaybta Suuqgeynta & xidhiidka dadweynaha 5. Cadnaan Daahir: Madaxa Qaybta Xidhiidhka Caalamiga 6. Maxamed Cabdi (Darbo): Ku-xigeenka Qaybta Suuqgeynta & Xidhiidhka dad- weynaha Telesom Newsletter, April — June 2012, Tirsiga 14aad " id="pdf-obj-2-103" src="pdf-obj-2-103.jpg">
Shirkadda Telesom Oo Jaamacadda Hargaysa, kuuli- yadda ICT-ga U dhistay dhisme cusub oo qalabaysan
Muuqaalka Sul. Maxamed Xasan oo ka waramaya ujeedada dhismaha
S hirkadda Telesom oo ah shirkadda ugu weyn
shirkaddaha isgaadhsiinta dalka uguna horu-
marsan technologyada, door weyna ka qaadata
horumarka dadka iyo dalka ayaa dhisme cusub oo qala- baysan u dhistay kuuliyadda Isgaadhsiinta & tiknoola-
jiyadda ICT ee Jaamacadda Hargaysa.
Xafladdii wareejinta oo lagu qabtay hoolka dhismahaas cusub ee jaamacada ayaa waxaa ka soo qayb-galay maamulka shirkadda Telesom, xubno ka socday goloha wasiirada oo ay ka mid ahayeen Wasiirka Diinta iyo Awqaafta, Wasiirka dhallinyadda iyo Ciyaaraha, Wasiirka Waxbarashadda, Wasiirka Boosha iyo Is- gaadhsiinta, Wasiirka Ganacsiga, Agaasimaha guud ee Tacliinta Sare, maamulka Jaamacadda Hargaysa iyo Jaamacadda Camuud, Ganacsato iyo marti-sharaf kale oo badan.
Suldaan Maxamed Xasan Ibrahim oo ka tirsan BOD-ka sare ee shirkadda Telesom oo munaasibada ka hadlay ayaa aad uga nuuxnuuxsaday doorka ay shirkadda
Telesom kaga jiro horumarka dalka, waxyaabihii ay shirkaddu qabtay lixdii bilood ee u danbeeyey.
“Waxa aanu Jaamacadda Hargaysa u dhisnay dhimse
qalabaysan oo lacagta ku baxday ay dhan tahay $100,000 (boqol kun oo dollar), dhismahaas oo ka kooban Hall-ka khudbadaha ah (Lecture hall), hal Hall oo lagu qalabeeyey 20 computer oo kuraastoodi iyo miisaaskoodii iyo qalab qaaliya (Cisco routers), is- toodh (store) iyo Musqul. Dhismahani aanu dhisnay
waxaa uu awood u leeyahay in la saari karo ama lagu
kordhin karo laba dabaqa iyo wax ka badan” ayuu
Prof. Mustafe Ceelaabe oo ah horumuudka kuliyadda culuumta Isgaadhsiinta & Tiknoolajiyadda ICT ayaa waxa uu Professor-ku madashaasi ka xusay qiimaha ay kuuliyadda ugu fadhido dhismaha iyo qalabkan loo dhamaystiray. Isagoo tilmaamaya qalab-ka ay shirkaddu ugu deeqday kuuliyada oo ay ka mid tahay CISCO Access router, kaas oo ah qalab aad u qaaliya
balse lagu qancay in Jaamacada Hargaysa la siinaayo.
Professorka waxa hadaladiisi ka mid ahaa, “Qalabkan
CISCO Access Router waa qalab ay iska leedahay shirkadda soo saarta qalabka lagu isticmaalo Internet, waana qalab aad u qaaliya oo jaamacadda Hargaysa na- siib u yeelatay inay hesho. Waa qalab qiimo weyn ku soo kordhin doona Jaamacada waxanu u sahli doonaa in
aqoonta ardayda si fiican loogu gudbin doono”.
Sh. Aadan Maxamud Xiiray (Adan Siiro) oo iska ka
mid ahaa mas’uuliyiintii goobta ka hadashay ayaa aad
ugu nuuxnuuxsaday, doorka ay Telesom kaga jirto bul-
shada iyo qiimaha ay waxbarashaddu leedahay, gaar ahaana adeegsiga culuumta Tiknolajiyada casriga ah.
Ugu danbayntii Marwo. Zamzam Cabdi Aadan, Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare ayaa xadhiga ka jartay dhimihii ay shirkadda Telesom u dhistay Jaamacadda Hargaysa. Waxaanay si toosa ugu wareejisay maamulaha qaybta horumarinta ga- nacsiga Telesom Md. Cabdisalaan Ismaacil Nuur, si uu furayaasha iyo masuuliyadii dhismahaasiba si rasmi ah ugu wareejiyo wareejiyey guddoomiyaha Jaamacadda Hargaysa Md. Muse Adan Cabdi.
Muuqaalka xafladii furitaanka dhismaha iyo mas’uuliyiintii ka soo qaybgashay
Shirkadda Telesom oo $25,000 ugu deeqay dhis- maha waddooyinka ee degmada Tog-wajaale
T elesom Newspaper, 29 April 2012: Shirkada Is- gaadhsiinta Telesom ayaa guddoonsiisay guddida hurumarinta degmada Tog-Wajaale deeq lacageed oo
dhan $25,000, munaasibadda lagu kala gudoomaayey lacagta oo ka dhacday Huteel Bile ee Magaalada Tog-wajaale, waxaa ka soo qayb-galay masuuliyiin sare sare oo ka tirsan shirkada
Telesom. Waxa kale oo iyaguna ka soo qayb galay Gudoomi- yaha Gobolka Gabiley, Gudoomiyaha Degmadda Tog-Wajaale iyo marti-sharaf kale oo badan.
Waxa Munaasibadaasi ugu horeyn hadal ka jeediyay Guddoo- miyaha Gobolka Gabiley Xuseen Cumar Magan waxaanu ma- had celin balaadhan u jeedinayay Shirkada Telesom, oo uu ku tilmaamay inay tahay shirkad had iyo jeer u taagan ka qayb- qaadashada horumarka dalka.
Waxa kale oo Munaasibadan hadal ka jeediyay Madaxa Waaxda Hurumarinta Ganacsiga (Business Development) iyo horumarinta goboladda shirkada Telesom Mr. Cabdisalaan Ismaaciil Nuur oo sheegay in ay Shirkada Telesom tahey shirkada kaliya ee ay wada leeyihiin guud ahaanba bulshada reer Somaliland islamarkaana, uu gobol kasta iyo degmo kastaba joogo qof wax ku leh Shirkada Telesom sidaasna ay kaga duwan tahey Shirkado badan oo ganacsi ah oo si gaar ah loo leeyahey. Waxaanu xusey in ay shirkad ahaan ku dedaalaan in ay xooga saaraan ka qaybqaadashada Adeegyada
bulshada oo ah waajib.
Cabdiwahaab Maxamud Maax, Madaxa Waaxda Ganacsiga iyo Cali Maxamed Salaax, Madaxa Qaybta Horumarinta goboladda ee Telesom ayaa iyaguna in ay waajib ku tahay shirkadda inay ka qayb qaataan waxqabadyada adeega Bul- shada oo ay ku dedaalayaan Gobol kasta in ay ka qabtaan in ala inta ay awoodi karaan.
Waxa kale oo ka mid ahaa madaxdii madashaas ka ha- dashay Gudoomiyaha Degmada Tog-Wajaale Mr. Xaashi Muxumed Cabdi, Gudoomiyaha Ganacsatada Degmada Tog-Wajaale Cabdilaahi Ismaaciil Nuur (Dhako) waxanay dhamaantood u mahad celiyeen shirkada Telesom ee ugu deeqday lacagtan gudida Hurumarinta iyo dhismaha Deg- mada Tog-Wajaale oo ah deeqdii ugu badneyd ee nooceeda ah ee loogu deeqo Tog- Wajaale, iyada oo aanay aheyn markii u horeysay ee ay Telesom ka qeyb qaadato Hurumarinta Tog-Wajaale balse ay hore uga qabtay mashaariic badan oo horumarinta, kuwa kalena ka qaybqaadan
Muuqaalka Md. C/Salaam Ismaaciil oo ka waramaya deeqda ay Telesom bixisay
Shirkadda Telesom oo $20,000 Ku Wareejisay Guddida Dhismaha Wadda Dawga Cad
T elesom Newsletter, 13 June, 2012, Telesom ayaa deeq la- cageed oo dhan $20,000
(labaatan kun oo dollar) ku wareejisay guddida dhismaha wadda Dawga cad ee isku xidhaysa Somaliland iyo Dji- bouti. Xafladda lagula kala gu- doomaayey deeqdan lacageed oo ka dhacaday hotel Maansoor ee ma- gaaladda Hargaysa ayaa waxa ka soo qayb-galay maamulka shirkadda Tele- som iyo Guddida Dhismaha Dawga cad.
Ugu horayn waxa hadalkii furitaan lagu soo dhaweeyey Md. Cabdisalaam Ismaaciil Nuur oo ah Madaxa waaxda Horumarinta Ganacsiga Telesom, waxaanu sheegay in dhismaha waddada Dawga caddi tahay mid mu-
hiiimad weyn u leh bulshadda Somali- land oo dhan. Waxa uu maamuluhu xusay in shirkadda Telesom qayb ka tahay bulshadda Somaliland ee waddadaasi loo dhisayo, diyaarna u tahay Telesom in ay ka qaybqaadato.
Waxaa isna sidoo kale kulankaas ka hadlay Eng. Cabdirashiid Muuse Iiman oo ka mid ah BOD-ka sare ee Telesom oo tilmaamay in shirkadda Telesom ay waajib ku tahay in door muuqata ka qaadato horumarka dalka, waxaanu shirkaddaha kale ugu baaqay in ay ku daydaan shirkadda Telesom oo ay ho- rumarka dalka iyaguna doorkooda ay ka qaataan.
Waxaa iyaguna xafladaasi ka hadlay masuuliyiintii guddida Dawga Cad
kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Suldaan Maxamuud Siciid, Eng.Yuusuf Axmed Yaasiin, Xaaji Maxamuud Cumar Xaashi, Eng. Axmed Siciid Warsame, Eng.Cali Cabdi Daymi iyo, Xaaji Cabiqaadir Xaashi Cilmi oo ah gudoo- miyaha guddida wadda dawga cad, dhammaan masuuliyiintani waxay shirkadda Telesom ugu mahadnaqeen doorkaa hormuudka ah ee ay qaaday bilowga wadda Dawga cad.
Waxana ugu danbaytii ay shirkadu guddoonsiisay lacagti ay ugu talo galeen dhisamaha waddada cad oo dhammayd $20,000 guddida ka hawl galaysa dhisamaha wadadaas oo noqon doonta mid wax wayn ka tarta baahidi loo qabay dawgaas.
Shirkadda Telesom Oo Gaadhi Land-cruiser ah guddoonsiisay Jaamacadda Nugaal (Laascaanood)
T elesom Newspaper - 26 April 2012: Munaasibada lagu qabtay Hoolka Jaamacada Nugaal ee
magaaalada Laascaanood ayaa shirkadda Telesom gaadhi Land-cruiser ah oo ay ugu deeqday jaamacadda Nu- gaal lagu guddoonsiiyay maamulka jaamacadaas. Munaasibadaas waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka kala socota Shirkada Telesom, Jaamcada Nugaal, Aqoonyahano, odayaasha iyo wax garadka Gobolka Sool iyo Ar- dayda Jaamacada Nugaal.
Telesom waa shirkadda kaliya ee ugu deeqday
$10,000” Md. Sugaal
Ugu horayna waxa madashaas ka had- lay Maamulaha Shirkadda Telesom ee laascaanood Cabddirsaaq Axmed War-
same (Dhabayaco), waxaanu halkaas ka sheegay waxqabadka shirkadda Telesom ay ka qabatay guud ahaan gobolka sool waxana uu ku dheeraaday wax qabadka ay kaqaban doonaan deegaandan. Sidoo kale waxa isna halkaas ka hadlay Faarax Sugaal Guure oo kamida masu- uliyiinta shirkadda Telesom, isaga oo sheegay in gaadhigani ay Jaamacadu ka codsatay shirkada Telesom shirka- dunu ay si niyadsami ah dalabkaas jaamacada uga jawaabtay. Waxanu sidoo kale xusay in shirkaddu markasta
taageerayso Jaamacada Nugaal iyo cidkasata oo wax qabsata oo ay shirkadu gacmo furan ku so dhaway- nayso. Waxa isna munaasibadaasi ka hadlay Cali Maxamed Saalax (Cajab) oo ah masuuliyiinta Shirkadda Telesom, oo sheegay in Jaamacada ay markasata la
garab taagnaan doonaan wixii taageero iyo tusaale ah. Ugu dambayntii waxa madashaas hadal qiimo leh ka jeediyay guddoomiyaha Jaamacada Nugaal C/Risaaq Lafoole oo sheegay in Jaamacad ahaan ay si
wayn u soo dhawaynayaan shirkadda Telesom. Waxaanay jaamacadu ballan qaadaynay in ay ilaalinayso gaadhigan jaamacada ay ugu deeqday Telesom, baahidii loo darbadayna lagu fulin doono. Guddoomiyihu mar uu ka hadlayay
taageeradda joogtada ah ee Telesom u fidiso jaamacadda waxa uu yidhi
“Shirkadda Telesom markasata waxa
ay nala garab taagan tahay taageero, waana shirkadii ugu horaysay ee naga taageerta dhismaha jaamacada ee hada lawado. Waana shirkadii keliya ee ugu horaysay ee lacag $10,000 ah na siisay xiligii aanu jaamcada abaabudaynay. Shirkadda Telesom ayaa waxa ay kaalin mugleh kaga jirtaa kor u qaadista waxbarshada, caawinta agoomaha, caawinta abaaraha iyo reer guuraaga. Waxa ay markasata u hee- lanatahay bulshada ay ka dhex shaqayso iny wax ku soo celiso waana astaamaha ay leedahay shirkadu. Dad waynaha magalada laascaanood ayaa waxa ay dareemeen wax qabadka shirkada Telesom, gaar ahaan caawinta agoomaha ee magalada laascaanood.
Muuqaalka Eng. Faarax Sugaal oo furaha gaadhiga ku wareejinaya Guddoomiyaha Jaamacaada Nugaal Prof. Lafoole
Muuqaalka Madaxda MPR-ka Telesom (Yaxye & Darbo) oo ka hadlaya mid ka mid ah xafladihii lacagaha lagu guddoonsiinayay waddooyinka
T elesom Newsletter -
11 April 2012-
ayaa deeq maaliyadeed gud- doonsiisay Guddidda dhismaha waddada Jameeco weyn iyo guddida Buundada Xaafada Kililka. Xafladda guddoonsiinta deeqd a maali yade ed e e shirkadda Telesom bixisay oo ka dhacday goobaha ay ka socdaan
shaqaddaa dhismaha waddada iyo buundada ee xaafada Jameeco weyn iyo kililka.
Ugu horeyn waxaa xafladdii guddoonsiinta deeqda maali- yadeed ka hadlay, maamulaha xidhiidhka dadweynaha iyo suuq -gaynta Md. Yaxye Iid Dhibiil, isagoo sheegay doorka ay shirkadda Telesom ka qaadato horumarinta arrimaha danta
guud ee ay bulshadu iskeed iska kaashato. Ugu danbayntii wuxuu guddoomiye Yaxye guddoon- siisay Guddida Dhismaha wadda da Jameeco weyn Lacag dhan
Shirkadda Telesom sidoo kale waxay deeq lacageed ugu de- eqday Guddida dhismaha buun- dada wadda xabaalaha Naasa- hablood. Buundadaas oo dhib weyn ku haysa baabuurta sidda mayd-ka iyo bulshada degan daanta Bariga ee xaafada Sh. Nuur ama Kililka. Haddaba shirkadda Telesom waxay dhis- maha Buundadaas ugu deeqday lacag dhan $2,000. lacagtaasi oo uu guddoonsiiyey Md. Max- amed Cabdi Darbo, ku xigeenka xafiiska xidhiidhka dadweynaha iyo Suuqgeynta.
Sidoo kale shirkadda Telesom waxay lacag dhan $3,000 dollar ugu deeqday dhismaha waddada xaafadda Jigjiga yar ee dhinaca waqooyi ka marta xarunta Tele- som Jigjiga yar, taas oo ay dhis- maheeda waddeen guddi ka koo- ban odoyaasha xaafadda oo si xilkasnimo ah hawshaasi u wadda.
Ugu danbayntii waxay guddi- yadii kala duwana ay shirkadda Telesom ugu mahadnaqeen sida deeqsinimadda ah ee ay uga qayb-qaadatay shirkaddu dhis- maha waddooyinka iyo horu- marka dalka guud ahaanba, waxaaynay shirkaddaha kale iyo ganacsatadda kaleba ugu baaqeen inay ka qayb-qaadataan dhismaha waddanka kuna day- daan shirkadda Telesom.
Shirkada Telesom oo Magaalada Berbera ku guddoonsiisay 41 Arday Muraayadaha Indhaha
T elesom Newsletter – 17 April 2012, Shirkadda TELESOM ayaa magaalada
Berbera ku guddoonsiiyay mu- raayadaha aragga 41 Arday oo isugu jira ardayda wax-ka-barata
dugsiyada magaalada Berbera. Ar- daydan oo ka mid ahayd 5000 oo arday oo ay shirkada TELESOM oo kaashanaysa dhakhaatiirta indhaha
ee ha’ayada MANHAL baadhitaan
iyo cabiraado inadhaha ugu samay- een mudadii u dhaxaysay 17-kii Ilaa 23kii April 2012ka. Munaasibadii guddoonsiinta mu- raayadaha oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxa ka soo qaybgalay Maayar- xigeenka degmada Ber- bera, qaar kamida xildhibaanada golaha deegaanka, guddoonka wax- barashada gobolka, wasaarada caafimaadka, maamulaha shirkada TELESOM BERBERA, maamu- layaasha dugsiyada, waalidiinta iyo ardaydii muraayadaha la guddoon- siinayay iyo waliba marti sharaf kale oo tiro badan. kibaaro
Ugu horayn waxa munaasibada ka hadlay maamulaha shirkada Tele- som Berbera Sh. Mustafe Cali Cumar oo sharaxaad ka bixiyay barnaamijkan iyo ujeedada ay shirkadu ka lahayd waxaana ha-
d a l a d i is i k a m i d a h a a ;
“Barnaamijkan waxa maalgalisay
shirkada Telesom oo kaashanaysa dhakhaatiirta inadhaha ee haayada MANHAl, waxaana ay ka dambay- say farriimo naga soo gaadhay waalidiinta dugsiyada qaarkood oo noo sheegay inay ardayda ku nool magaalada Berbera maadama ay tahay magaalo kulul u baahan yi- hiin in wax laga ogaado xaalada caafimaad ee ay indhohoodu ku
suguntahay. Sidaa awgeed
Muuqaalka Mustafe Cali Cumar oo ka hadlaya munaasibadda
shirkadda Telesom markiiba si dhakhsa ah ayay uga jawaabtay dalabkaas. Ardayda baadhitaanka lagu sameeyay tiradoodu waxay dhamayeen 3400 arday, qaar kamida waxa loo qoray daa- wooyin, 41 ka mid
ayaa caawa halkan muraayadihii
araga lagu gudoonsiin doona.’’
Waxa kale oo isguna halkaa ka
hadlay maayar-xigeenka deg- mada Berebra Cabdi Jaamac Fad- uul, wuxuuna shirkadda Telesom uga mahadceliyay hawshan khey-
riga ah ee ay fulisay, isaga oo ugu baaqay shirkadaha kale ee la midka ah in ay ku daydaan. waxa kale oo isna madashaas ka ahdlay isuduwaha wasaarada diinta iyo
awqaafta go bol ka
sh.salebaan siciid cali oo si aada ugu mahadceliayay shirkada tele- som iyo maamulkeda waxa uu sheekhu sheegay inuu barnaami- jkani yahay mid kheyriya oo lagu farxo waayo qofka bini aadamka ah waxa ugu mihiimsan araga hadii uu waayana noloshiisa wax- badan ayaa ka dhiman,sidaa aw-
geed shirkadu waxay qabatay buu yidhi wax aan cidin ilaabi Karin ugu dambayna wax uu bulshada ugu baaqay inay iyaguna shirkada u noqdaan macmiil wanaagsan oo ay ogaadan shirkada wax u qaba- naysa . Munaasibadan oo ay dad badani ka hadleen ayaa waxa ka mid ahaa dadkii ka hadlay Isu-duwaha wa- saaradda Diinta iyo Awqaafta Sh. Saleebaan Siciid Cali, Xildhibaan Cabdi Jaamac Ducaale (Musbaar], Jamac Cabdilaahi Aw Aadam oo ka socday bahda wasarada Caafi- madka, maamulaha dugsiga sare ee Bursade iyo Dr.Axmed Carab oo ka socday haayada MANHAL oo ah dhakhtarkii isagu indhaha u cabirayay ardayda wuxuuna aad ugu mahad celiyay shirkada TELESOM iyo guu ahaanba cid kasta oo gacan ka geysatay barnaamijkan kheyriga ah, ge- bagebadiina wuxuu halkaa ka xaadiriyay ardaydii uu u qoray muraayadaha aragga, iyada oo arday kastana lagu wareejiyay mu- raayadiisi.
Daahfurka Diiwaankii Maansooyinka Abwaan Timacade oo Af-Ingiriisi lagu qoray
T elesom Newsletter, 29 June, 2012 - Shirkadda Isgaadhsi- inta ee Telesom, ayaa maal-
galisay xaflad lagu Daah furey Buug cusub oo af Ingiriisi ah oo laga qoray Suugaantii iyo taariikh nololeedkii
Abwaankii weynaa ee Cabdilaahi Suldaan Timecadde.
Munaasibadan oo ka dhacday hotel Maansoor ee magaaladda Hargeysa, ayaa waxa ka soo qaybgalay qoraaga Buuggan Boobe Yuusuf Ducaale, qoraa Jaamac Muuse Jaamac, Agaasi- maha madaxtooyadaa Xasan Cabdi Madar, masuuliyiin, dhallinyaro rag iyo haweenba iskugu jira iyo marti sharaf kale. Sidoo kale, waxa iyana ka soo qaybgalay saraakiil ka tirsan shirkadda Telesom oo ay ka mid yihiin madaxa horumarinta ganacsiga shirkadda Cabdisa- laan Ismaaciil Nuur, madax ku xigeenka waaxda xidhiidhka dadweynaha iyo suu- qgeynta Maxamed C a b d i A x m e d (Darbo), iyo Mustafe Aadan Muuse oo mad ax xafiiska adeega macaamiisha iyo xidhiidhka dad- weynaha.
madaxa horumarinta ganacsiga Shirkadda
isgaadhsiinta ee Telesom Cabdisalaan Ismaaciil Nuur, waxaanu u hambaly- eeyey qoraaga buugan diiwaanka maansooyinkii Abwaankii weynaa ee Cabdilaahi Suldaan Timacadde oo af ingiriis ah waana buugii afraad ee laga qoro gabayadiisa, waxaanu ku dhiiri-
galiyey qoraaga sida hagar la’aanta ah
ee uu dadkiisa uga haqabtiro dhac- dooyinkii soo maray.
Waxa isaguna halkaasi ka hadlay qoraaga: Jaamac Muuse Jaamac oo qoraaga buuugan lagu qoray af Ingiri- isa ku tilmaamay horumar weyn iyo wax cajiib ah oo uu aad uga helay, maadaama oo abwaanka buuga laga qoray ahaa abwaan aad u qaali ah, isla markaana mudan in dadka ajanabig ahi ogaadaan aqoonta ay dadkeenu lahaayeen.
Sidoo kale, waxa iyagunua ka hadlay Abaan Axmed Aw Geeddi oo abwaan Timacade ku tilmaamay mid aan dadka af soomaaliga ah waligii laga helayn waxaanu sharaaxaad dheer ka bixiyey shakhsiyadii Cabdilahi Suldaan Timacadd iyo siduu u ahaa abwaan weyn oo aan sidoo kale cid la mid ahi aynay somali ka soo dhex bixin isaga dabadii.
Waxa Gebogabadii soo xidhay muna- sibadaas bandhiga qoraaga Buugan cusub ee Af ingiriisa ku qoran: Boobe Yuusuf Ducaale oo ka sheekeeyey taariikhdii Abwaan Cabdilaahi Suldaan Timacadde, waxaanu sheegay in buugani yahay kii u dambeeyey ee uu ka qoro abwaanka, maadaama oo kani yahay kii afaraad ee laga qoro abwaanka.
Waxa diyaariyay xafiiska HRM-ka
Cabdirisaaq Cali Maxamuud
waxaanu ka mid noqday shaqaalaha Telesom Laascaanood, gaar ahaan qaybta Iibka & Suuq- geynta. Shaqooyinka kale ee uu c/risaaq shirkadda u soo qabtay waxa ka mid ahaa; madaxa suu- qgeynta & Iibka (Sales & Marketing Manager), Ku xigeenka madaxa Telesom Laascaanood iyo xisaabiyaha guud oo uu hadda yahay (Deputy Site Manager & Accountant).
Cabdirisaaq, mudadii uu shirkadda u shaqeeynayay waxa uu sameeyey dedaal iyo horu- mar la taaban karo, taasna waxaa inoo cadeeynaya xilalka calculus ee uu qabtay intii uu joogay iyo derajooyinka uu gaadhay, horumarkaas uu sameeyey waxaa uu ku mutaystay Abaalmarino iyo Shahaadooyin.
Q ormadeenii taxanaha ahayd ee baro mid ka mid ah hormuudka shaqaalaha shirkad- daTelesom, tirsigan oo ah kii 14aad waxa
aynu ku sooryaynaynaa Cabdirisaaq Cali Maxa- mud oo ka mid ah shaqaalaha Telesom Laas- caanood, gaar ahaan Qaybta Xisaabaadka.
Cabdirisaaq Cali Maxamuud waxa uu ku dhashay magaalada Laascaanood, sannadkii 1962-kii, waxa uu ku dhamaystay waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe Magaalada Laascaanood , wuxuu dugsiga sare ku dhamaystay Dugsiga sare ee Sheekh Bashiir, Magaalada Burco. Sidoo kale waxa uu ka qallinjabiyey Jaamacada Nugaal ee Magaalada Laascaanood kulliyada Computer Science-ka (Bachelor of Computer Science).
Dhinaca Waxbarashada Dadban, Cabdirisaaq Cali Maxamud waxa uu sannadkii 1984 dhamaystay Machadka Tababarka iyo Xisaabaadka ee Jaamac- ada Carabta, 1985 waxa uu dhamaystay Course Luqadaha Talyaaniga (Culture De Italiano), 2006 waxa uu dhamaystay Financial Accounting, Jaamacadda Nugaal.
Shaqada shirkadda Telesom waxa uu Cabdirisaaq markii ugu horaysay bilaabay February, 2003
Cabdirisaaq Cali Maxamud waxaa kale oo uu ka soo shaqeeyey Commercial and Saving Bank Of Somalia, Mogadishu sannadihii u dhaxeeyey 1986 ilaa 1991, waxa kale oo uu ka soo shaqeeyey Yemen, Saudi Arabia sannadihii u dhaxeeyey 1992 ilaa 1995.
Cabdirisaaq waxaa uu mudadii uu shirkadda u shaqeeynayay qaatay tababaro farabadan, kuwaas oo iskugu jiray qaybo kala duwan oo la xidhiidha masuuliyadihii shaqo ee uu markaa hayay, taba- baradaas waxaa ka mid ah:
Sidaas daradeed, markii uu maamulka shirkadda iyo xafiiska shaqada shaqaaluhu arkeen kartida iyo dedaalka uu muujiyey, mudane Cabdirisaaq Cali Maxamud waxa loo caleemo saaray inuu ka mid noqodo shaqaalaha hal-doorka ah ee Telesom, laguna suxo majaladda Telesom.
Gebogebadii Cabdirisaaq oo kaliya maaha shaqaalaha kor u qaaday aqoontooda, xirfadooda & horumarkooda shaqo ee waxaa jira shaqaale badan oo aanu mid mid ugu soo qaadan doono tir- siyada soo socda ee Majalada Telesom.
Telesom oo tababartay shaqaala- heeda, si loo horumariyo shaqada
T abobarka shaqaalahu waxa uu ka mid yahay dhiirigelinta ugu weyn ee shirkadda Telesom
ay siiso shaqaalaheeda. Si loo soo saaro shaqaale mihnadyaqaano ah oo masuuliyaadkooga shaqo u leh aqoon
xeel dheer waa aragtida dheer iyo himilooyinka ay hiigsanayso Telesom.
Sidaas daraadeed; xafiiska shaqada iyo shaqaalaha Telesom waxay tababaro u qabteen saddexdii bilood ee u dan- beeyay qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda ee ka hawlgala Hargeisa iyo Gobalada,
Haddaba, Xafladihii furitaanka taba- baradaasi waxaa lagu qabtay hoolalka shirarka iyo tababarada ee xarumaha Hargaysa, Boorama iyo Burco,
waxaana ka soo qayb galay oo ujee- dooyinka tababarada ka jeediyay
mas’uuliyiinta ay ka mid yihiin: Faarax
Sugaal Guure, madaxa waaxda Maa- mulka; C/Wahaan Maax, madaxa waaxda ganacsiga; Mustafe Askar Faarax, madax-xigeenka shaqada & shaqaalaha iyo maamulayaasha Burco iyo Borama, Maxamuud Xaaji Ibraa- him iyo Cabdiqaadir Adam Nuur.
Iyadoo Xafiiska Shaqada & Shaqaa- luhu ka duulayo qorshe-sannadeedka
xafiiska, ayaa waxa uu go’aansaday in
tababaradaas lagu qabto xarumaha shirkadda ee Hargeysa iyo Borama iyo Burco oo shaqaalaha Gobalada ka hawlgala loogu qabtay.
Mustafe Askar, madax-xigeenka shaqada & shaqaalaha oo diyaariyay maqaalkan
Shaqaalihii tababarada la siiyay waxa ay ka kala tirsanaayeen qaybaha: Sales, Zaad, MPR, Landline, Security, Engi- neering iyo shaqaalaha xarumaha goboladda. Waxaana muuqata tabarada shaqaalaha la siinayo in ay ka mid yi- hiin waxyaabaha ay shirkadu ku noqo- tay hormoodka isgaadhsiinta dalka,
Tababaradani mudadii ay socdeen waxa ay shaqaaluhu qaateen tababaro kala duwan oo loogu tala galay in kor loogu qaado adeega ay shirkaddu ma-
Maamulka Telesom oo darajo sare ku qaabilay mulkiilaha Somalilandpress
M aamulka shirkadda Tele- som waxa uu 5 May, 2012 soo dhawayn heer-
sare ah ku qaabilay Mulkiilaha ahna tafaftiraha shabakadda wararka ee Somalilandpress, kaas oo booqosho
gaaban dalka ku Somaliand ku yimi.
Soo dhaweyntan oo ahayd mid lagu maamuusayo Mulkiilaha shabakadda SomalilandPress, Mr. Maxamed Ibraa- him ujeedeeduna ay tahay in la tuso horumarka baaxadda leh ee shirkadda Telesom Telesom ku soo kordhisay guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
Xafiiska shirkadda Telesom u qaabil- san xidhiidhka warbaahinta (Media Relations) oo gadh-wadeen ka ahaa soo dhaweyntan, waxa ay socdaal indho-indhayn ah (Tour) ku soo mari- yeen Mr. Maxamed Ibrahiim xa- rumaha ugu muhiimsan shirkadda, sida xuranta shacabka oo uu yaalo system-ka shirkadda, xarunta guud ee Telesom (Telesom Tower), Xarunta Iibka (Sales Department) iyo xarunta guud ee Salaam Financial Services.
Xidhiidhka Caalamiga ah Mr. Cad- n a a n Da a h ir a y a a b a n d h i g (Presentation) qiimo badan ka siiyay
Maxamed guud ahaan taariikhda iyo adeegyada ay bixiso Telesom iyo mustaqbalka himilada ay leedahay.
Sidoo kale, waxa uu Mr. Maxamed Ibraahim kulan kooban la yeeshay guddoomiyaha guud ee shirkadda Mu- dane Cabdikariim Maxamed Iid.
Muuqaalka Guddoomiyaha Golaha fulinta ahna madaxa hawlgelinta Telesom oo xafiiskiisa ku qaabilay Mulkiilaha Somalilandpress
Cabdisalaan Ismaaciil Nuur, Maamu- laha xafiiska horumarinta Ganacsiga oo ka hadlayay sababta soo dhaweynta
ayaa yidhi; “Maxamed waa muwaadin
dalka kaalin weyn kaga jira, sidaas
daraadeed; waxa waajib nagu ah in
aanu sooryayno, isaga iyo ciddii kale
ton, casiimadiisa Massachusetts. Max- amed wax uu dalka ka maqnaa muddo dhawr iyo labaabtan sanno ah. Hadda waxa uu ku shaqeeyaa International Marketinga.
ee horumarka dalka ka shaqaynaya.”
Mr. Maxamed Ibraahim, mulkiilaha shabakadda Somalilanpress oo isaguna ka hadlayay martqaadka ay Telesom u
samaysay ayaa yidhi; “Aad iyo aad
ayaan ugu faraxsanahay in aan la
kulmo maamulka Telesom. Shirkadda Telesom horumar weyn ayay gaadhay, waxaana la odhan karaa waa shirkad Caalamiya, maadamaa ay u shaqayso sida shirkaddaha Caalamka. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa qado-
sharafta ay ii sameeyeen.”
Mr. Maxamed Ibraahim waa mu- waadin u dhashay dalka Somaliland oo hadda ku nool wadanka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Bos-
1. C/kariim Maxame Iid, Guddoomi- yaha Guud ee Telesom
2. Ciise Maxamuud, Madaxa Hawl- gelinta Telesom
3. C/salaam Ismaaciil, Madaxa qay- bta horumarinta Telesom
4. Yaxye Iid Dhimbiil, Maamulaha waaxda Suuqgenta & Xidhiidhka dadweynaha
5. Maxamed Cabdi (Darbo), Maa- mule ku xigeenka Suuqgeynta & Xidhiidhka Dadweynaha
6. Cadnaan Daahir
Xafiiska Xidhiidhka Caalamig ah
7. Mustafe Adam,
xafiiska adeegga macaamiisha iyo warbaahinta.
8. Cabdiraxmaan Adam Ismaaciil, maamulka xafiiska Suuqgeynta.
qaadanay buug yare uu diyaariyay
Suldaan Maxamed Xasan oo ka tirsan
BOD-ka shirkadda, kaas oo uu ku diyaariyay noo-
cyada zakada, habka loo bixiyo, maalka ay ku waa-
jibto iyo wakhtiyada la bixiyo.
4. HABKA LOO SEKEEYO RIKAASKA IYO MACDANTA:
Inta aynaan u gundo degin sida loo sakeeyo Rikaaska
iyo Macdanta, waxa aanu qeexi doonaa macnayaasha
labadan maal waa sidan:
Waxaa layidhaahdaa xoolaha (hantida) laga helo
dhulka hoostiisa amaba dushiisa, ha ahaadeen dahab,
fido ama hanti kale oo qiimo leh, kuwaas oo ay
aaseen ama ka tageen quruumihii hore ee jaahiliga
ahaa (aan islaamka ahayn).
Haddii ay dhacdo in laga helo hanti noocaas oo kale
ah meel uu qof Muslim ahi leeyahay isaga ayaa leh
maadaama laga soo saaray dhulkii uu mulkiga u la-
Hantida laga helo meel ay muslimiini deganaan jir-
tay laguma magacaabo Rikaas ee waxaa la yid-
haahdaa baadi (luqada), waana layaboohinayaa
(baafinayaa), muddo laba iyo toban bilood ah. Had-
dii mudadaas cidi soo sheegan weydo waxaa yee-
(boqolkiiba shan ) la siinaayo cidii alle u cayimay,
waxaana loo eegayaa sida xoolaha kale inay yihiin
seko goys, hayeeshee looma eegaayo inay gaadhaan
xawlkii oo ah sannad inuu u buuxsamo.
6. MACDANTA IYO QAAB SEKAYNTEEDA :
Macdantu waxay lamid tahay Rikaaska xaga nisaabka
(seko goyska), waxayse kaga duwan tahay imisa ayaa
laga bixinayaa, arrintan culimadu way isku kilaafeen
waxay ka qabaan laba aragtiyood oo kala ah sidan:
lanaaya cidii heshay waana la isticimaalayaa, iyadoo
Mad’habka xanafiyadu waxaa uu qabaa in
laxafidaayo calaamadaha ay alaabtaasi lahayd si had-
laga bixinaayo 5% (boqolkiiba shan).
dii ay cidi soo sheegato loo magdhabo.
Culimada kale ee kala ah: Imaam Maalik ,
T: Macdanta :
Waxaa loo yaqaan waxkasta oo laga soo saaro
dhulka hoostiisa oo leh qiimo, taasi oo ah wax ilaa-
hay ku abuuray ee aan aadamuhu dhigin.
Hadaba xoolaha noocaas oo kale ah habkee ama
sidee ayay u sekoobayaan, marka hore waa inaan
xasuusnaano in ilaahay siiyay cida uu ku ilhaamiyo
inay soo saaraan kuna waajibiyay inay iska bixiyaan
xaqa masaakiinta iyo cidii baahan ee muslimiinta ka
mida, waxanina ay yihiin maal alle inoo xalaaleeyay
ilaahayna waxaa uu ku yidhi kitaabkiisa sidan:( اهٌّأ اٌ
ٌٍذ ّ نا
267ةزقبنا: ) ضرلأأ
Hadaba Rikaasku wuu ka duwanyahay macdanta
maxaa yeelay waa xoolo ay ka tageen gaalo oo uu
helay qof ama dad muslimiin ahi, sidaas darted,
waxaa laga bixinayaa markii laheloba 5%
Imaam Axmed binu Xanbali iyo qawl uu
leeyahay Imaam Shaafici waxay isku raac-
sanyihiin in ay ku waajibayso 2.5%, iyaga oo
uga qiyaas qaadanaaya lacagihii caadiga ahaa,
waxaana la siinayaa sideedii qolo ee ilaahay
ku cadeeyay Qur,aanka kariimka ah.
Fiiro gaar ah: Waxyaabaha lagala soo baxo badda
hoosteeda ama xeeliyadeeda ee macdanta ah ama qii-
maha leh way sekoobayaan, waxayna u sekoobayaan
Haddii lagu soo bixiyay tacab iyo dhibaato waxaa laga
bixinayaa 5% (boqolkiiba shan ), haddii layska he-
layna waxaa laga bixinayaa 10% (boqolkiiba toban ),
inkasta oo ay jiraan culimo qabta inaan waxba laga
bixinayn, iyagoo leh ma jirto wax daliil ah oo
sheegaaya in wax laga bixiyo maalka caynkan oo kale
Ka Eeg Bogga 18aad
7. SIDA LOO SEKEEYO MALABKA:
Malabku waxaa uu ka midyahay nimcooyinka ilaahay
ku tilmaamay Qur’aanka kariimka ah, isaga oo til-
maamayana waxaa uu alle yidhi:
( اًّيو زج شنا ٍيو اتىٍب لابجنا ٍي يذح ّ تإ ٌأ مح ّ ُنا ىنإ كّبر ىحوأو
ٍي جزخٌ ‘
لانذ كّبر مبس ًكهسأف ثازً
ثنا مّ ك ٍي ًهك ىّث
وىقن تٌلأ كناذ ًف ٌّ إ سُ ا ّ ُهن ءافش هٍف هَاىنأ فٌ هتحي بٌ ازش اهَىطب
Aayadkan oo macnahoodu aad u layaab badan yahay
waxaa macnahoodu yahay sidan:
(Waxaa ilaahay u waxyooday shinida inay ka
samaysato Buuraha, dhirta iyo meelaha ka samay-
san waababka guryo, waxaad cuntaa dhammaan
midhaha, raac wadooyinka rabigaa oo kuu dulay-
san, waxaa ka soo baxaaya caloosheeda sharaab
uu kala duwan yahay midabkiisu, waxaa ugu su-
gan dadka caafimaad, arrintaasi waxay u tahay
dadka fekeraaya aayad ay wax ku qaataan).
Haddaba, waxay culmada islaamku isku khilaafeen
malabkan ay shinidu samaysay ma ka baxaysaa
sekada ka baxda maalka qofka muslimka ah, badh ka
mida culimadu waxay ku tageen in aanay wax seko
ahi ka baxayn, iyagoo uga daliil qaadanaaya in aan
haba yaraatee lahayn wax daliil ah oo kusoo arooray
Qaar kale oo ka mida culimaduna waxaa ay qaateen
inuu sekoobaayo malabku, sababna waxaa ay uga dhi-
gayaan inay shinidu daaqdo ubaxa kasoo baxa dhirto,
kaas oo ah cuntooyinka in la kaydiyo xamili kara, sa-
babtaa awgeed ayay qaateen in malabku uu ka mid no-
qonaayo waxyaabaha ay sekadu ka waajibto.
Hadaba hadiiba aynu qaadano qawlka odhanaaya hala
sekeeyo maxay noqonaysaa sekada ka baxaysaa?,
Culmada ku tagtay in la sekaynaayo waxay hadana
isku khilaafeen qaderka laga bixinaayo, qaar waxay
leeyihiin inta yar iyo inta badanba waa la sekaynayaa,
qaarna waxay leeyihiin waxaa uu ku sekoobayaa inta
ay ku sekoobaan midhaha ka soo baxa beeraha roobka
ku baxa oo waxaa ka baxaaya 10% (boqolkiiba toban)
inta kuusoo bislaatay, waxaana la bixinaya mawsimka
ama waqtiga aad goosato.
Haddaba, arrinta malabku waa arrin qaabkeeda ay culi-
madu isku khilaafsan tahay, waxaana fiican oo aan ku
talinayaa qofkii ilaahay ku irsaaqo inuu beerto malab
badan oo xadkaa la tilmaamay gaadhi karaa inuu iska
bixiyo seko, isagoo alle ugu mahad naqaaya nimcadaas
uu siiyay ee cajiibka ah oo uu qaato qawlkaa sekada
8. MUSHAHAAROOYINKA WIXII KASOO HADHA BAA- HIDA QOFKA:
Arrintani waxay ku xidhan tahay wixii dheeraada baa-
hida qofka mushahaar qaataha ah iyo baahiyihiisa, had-
dii ay u dhiganto lacag ka badan baahidiisa asaasiga ah
oo ay gaadho xawlkii iyo seka goys waxaa ku waaji-
baysa seko, waxaana ay noqonaysaa inuu sekeeyo una
sekeeyo sidii caadiga ahayd ee aynu hore u soo sheeg-
nay markaynu lacagta ka hadlaynay. Waxaana uu ku
dhufanayaa lacagta uu haysto 2.5% ama 2.575% da-
badeed inta ay noqoto xisaabtaasi ayuu iska bixinayaa.
9. HABKA LOO SEKEEYO SAAMIYADA:
Waa maxay saamiyadu ? Saami waxaa la yidhaahdaa
lacagaha ay dadku isku darsadaan si ay u noqdaan
shirkad soo saarta lacag laga helo faa’iido qiima leh ,
isla markaana loo sameeyo maamul wada hawshaas, si
looga dhaliyo faa’iido.
Hadaba saamiyada noocaasi oo kale ahi waxay u
qaybsamaan laba nooc oo kala ah:
Ka Eeg Bogga 19aad
1. Saamiyo sidooda looga ganacsado oo la eego subaxba qiimaha uu ka joogo suuqa saamiyada lagu kala iibsado (Stock market) oo markii kor uu u kaco oo faa’iido fuusho uu hore ka iibinaayo qofkii saamigaa lahaa, haddii saamiyada qiima- hoodu hoos u dhacana uu iibsanaayo saamiyo dheeraad ah, macneheedu waa lacagtii ama alaabta ay ku jirto oo aad ilaashanayso khasaare iyo faa’ii- doba oo haddii faa’iido fuushana aad hore ka gadayso, haddii ay hoos u dhacdona aad koradhsanayso si aad markale uga faa’do. Hadaba midaas oo kale waxaa loo sekaynayaa sida lacagta caadiga ah waxaana laga bixinayaa 2.5% (boqolkiiba ) ama 2.575% oo ah qiimaha uu subaxaa suuqa ka joogo xawlna kasoo wareego.
2. Waa Saamiyo laysku darsaday oo la geliyay wax magac loo bixiyay oo ganacsi ah sida: Shirkad Adhiga dhoofisa ama dukaamo leh ama bagaashka ka ganacsata oo sannadkii ama waqti lagu heshii- yay xisaab xidhkeeda in la sameeyo dabadeedna faa’iidada soo baxda la qaybsado ama khasaara- haba amaba lagusii kordhiyo saamiyadii hore wixii soo baxay sannadkaas ee faa’iido noqday.Shirkada sidaas oo kale u dhisan seko bixinteedu waxay ku xidhan tahay marwalba heshiiska shirkada u yaala ee ay ku heshiiyaan saamiilayaashu haddii ay ku heshiiyaan in si guud shirkada looga bixiyo waxaa sekada laga bixinayaa marka xisaab xidhka la sameeyo ee ay muuqato faa’iidada sannadkaasi ayaa waxaa laysku darayaa ra’sulmaalkii hore iyo faa’iidadii soo baxday sannadkan, ha ahaato magac ama kaashba dabadeed waxaa loo geynayaa amaa- hda shirkadda ka maqan ee loo aqoonsaday in la helaayo ama ay soo noqonayso, dabadeed waxaa laga jarayaa:
 Kharashkii loo galay shirkada danteeda oo
keliya sida mushahaarooyinka, shidaalada
Daynta lagu leeyahay shirkada.
Intaas markii laga jaro waxa soo hadha ayaa la sekay-
nayaa, marka aanay shirkadu ahayn shirkad ku
shaqaysa wax soo saarka hantida ma guurtada ah.
Waayo taa waxaa aynu tilmaami doonaa habka loo
sekaynaayo iyo waxaa laga bixinaayiba .
Qiimaha saamiga marwalba waxaa asal u ah qiimaha
uu dahabku ka maraayo saylada ay joogaan xoolaha la
sekaynayaa inta uu dahabku ku sekoobayaa waa 85g.
Markaa xoolahaaga ama lacagtaada waxaad ubedelay-
saa inta ay dahabka ka goynayaan subaxaas, da-
badeedna waxaad ku dhufanaysaa inta soo baxda
2.5% ama 2.575% hadba taariikhda aad qaadato.
Qiimeyntani waa marka aad joogto wadan aanay
fadhiyin lacagtiisu sida uu hada yahay wadankeenu oo
kale, waxaad kale oo qiyaas ka dhigan kartaa lacagaha
sida caadiga ah loo isticmaalo sida Dollarka
Maraykanka oo noqday halbeega lacagaha wadamada
soo koraaya ama qof waliba uu ku qiyaasanayo capi-
talka (raasamaalka) uu haysto. Waxaa laga bixi-
naayana culimada way isku khilaafaan, waxaanay
isugu khilaafsan yihiin sidan:
Al-jamuurka (waa sida loo badanyahay) iyo shirarkii
majmacul fiqhiga ee lagaga hadlaayey arrinta sekada
ee lakala qabtay sannadahan 1965 M/ 1385 H Masar
iyo 1985 Kuwayt, 1984 – Rajab 19, 1404 kuwayt.
Intuba waxay isku raaceen in nisbada laga jarayaa ay
noqonayso 2.5% taariikhda hijriga ah taariikhda mi-
laadiga ahna waxaa laga jarayaa 2.575% taas oo u
Sidee ayuu ku yimaadaa Cudurka Faalijku?
B ogga Caafimaadka ee majalada Telesom tirsigan waxa
aynu ku soo qaadanaynaa xanuunka faalijka ama
Hemiplegia oo dhibaato-weyn ku haya guud ahaan
Mawduucan hore ayaynu ugu soo qaadanay tirisigii 4aad ee Majaladda Telesom, sababta aanu ugu soo celinay waa xanuunkan oo aad ugu soo badanaya bulshadda.
Haddaba xanuunka, waxyaabaha keena, calaamadihiisa, daawayntiisa iyo kahortagiisaba waxa aynu ku soo qaadan doonaa qormadan oo uu soo diyaariyay Dr. Axmed Aadan Axmed (Buuxane). Faalijka ama hemiplegia-yadu waa qalalid ama adayg ama daciifnimo ku timaada dhinac dhan oo is raacsan oo ka mid ah jidhka qofka sida wajiga, gacanta, saablayda, ubucda, ilaa iyo lugta. Waxaana sababa marka ay waxyeelo soo gaadho xidida dhiiga ee maskaxda mara, taasoo keenta qaybtii maskaxda ee xididkaasi quudinayey inay waxyeelowdo, oo ay dhiig beesho dabadeedna ay dhimato. Inta badanna way is waydaarsan yihiin dhinaca maskaxda ee waxyeeladu gaadhay iyo dhinaca jidhka ee faalijka calaamadihiisu ka muuqdaan, (tusaale ahaan hadii dhinaca bidix ee maskaxda wax gaadhaan waxaa qalalka ama daciif- nimadu ka muuqanaysaa waaxda midig ee jidhka qofka). Waxaana dhibaatada qofka ka muuqanaysaa ay kolba ku
xidhan tahay xadiga xididada dareenka ee waxyeeloobay (neurological damage), oo haddii goob yar uun ay wax gaad- haan waxaa suura gal ah in qofku aanu wax waynba dare- emin, haddiise goobta ay waxyeeladu gaadhay ay wayntahay waxaa iyana aad u muuqanaysa qaybta jidhka ee faalijku qabanayo.
Sababaha keeni kara waxaa ugu badan:
Cillad degdeg ah
xidida dhiiga ee maskaxda (cerbrovascular accident CVA) sida
a.xididka oo xinjiri awddo
(thrombosis) b. xididka oo dilaca dabadeed dhiigu ku furmo (shubmo) maskaxada (heamorrhage)
Xidid yar oo waqti aan badnayn
xidhnaada (transient ischemic attach
faradka ama shimbirta cidba sida ay u
keenay in dhiig ku furmo maskaxda iyo xuubabkeda a.xuubka u dhexeeya lafta adag ee madaxa iyo maskaxda (subarachnoid
hemorrhage) b.ama xuubka ku wareegsan maskaxda (epidural hema- toma)
5. Cudurka macaanka ama sokorowga 6. Kansaradda (Burooyinka) ka soo baxa maskaxda guda- heeda (brain tumors) 7. Infectionada ku dhaca maskaxda sida a.Brain abscess b.Encephalitis. c.Subdural empyema d.meningitis Iwm iyo kuwo kaloo badan
Dhamaana qodobadaa aan soo sheegnay waxa ay sababa- yaan
1.In xidid xidhmo oo uu awdmo dabadeedna qaybta mask- axda ee uu xididkaasi quudiyo dhiig beesho dhimato 2.In goob ka mid ah maskaxda uu cadaadis xoog lihi ku dhaco kaasoo ka imanaya a.Dhiig ku furmay oo ku xinjirooba , b.Dakhar nabar keena oo isna dhaawaca maskaxda , bir iyo xabad iwm c.Dheecaan infection ka yimid
d.Burro ka soo baxda maskaxda, dhamaan qaybtani waxa ay cadaadis ku samaynayaan goob ama qayb ka mid ah maskaxda taasoo keenaysa in xididadii dareenka (nerves) ee goobtaa ku jaray ay dhintaan (space occupying lesion sol). Haddaba waxaa aad u badan nooca awdmidda xididada dhiiga oo ay xinjir dhiig ahi awdayso. Waxaana Cuduradda keenana waxaa ugu caansan dhiig karka iyo macaanka
Ka Eeg Bogga 21aad
Dr. Axmed Adam Axmed
Da’da uu ku dhaco xanuunkani waxaa u badan dadka ka
wayn 50 sano, waxaana u badan ragga marka la is barbar dhigo ragga iyo dumarka
Waxyaabaha nugleeya faalijka
Waxaa jira waxyaabo badan oo bukaanka u nugleeya ama ka dhiga mid u jilicsan ku dhicidda faalijka, waayo waxaa la arkay in dadka laga helo qodobadani uu faalijku kaga soo dedeg badan yahay, waanay ugaga nugul yihiin marka la bar- bar dhigo dadka kale een qodobadaa laga hellin:
1. Dhiig karka
3. Da’da oo sii waynaata
4. Dadka cudurradda wadnaha qaba
5. Dadka daroogada iyo maandooriyayaasha isticmaala
6. Dadka leh dhanjafka (migraine headache)
7. Dadka uu kor u kaco dufanka dhiigoodu (cholesterol)
8. Dadka sigaarka caba
9. Dadka miisaankoodu wayn yahay (buuran)
10. Dadka noloshoodu (shaqdoodu) fadhiga u badan tahay een jidhkoodu helayn waqti uu kala baxayo (sedentary life)
11. Dumarka isticmala kiniinadda kala dheereeya dhal- mada Iwm.
Haddaba marka maskaxdii jugtaasi gaadho waxaa qaybtii jidhka ee goobtaa maskaxda ee waxyeelowday ay xukumay-
say ka dhacaya faalij (paralysis), waxaana calaamadaha ugu waawayn ee lagu arki karo ka mid ah:
1. Qofka oo wajigu qaybi qaloocsanto (af qalooc) (facial palsy)
2. Qofka oo hadalka kari waaya ama erayadda uu leeyahay la fahmi waayo (aphasia)
3. Liqitaanka rashinka oo dhiba iyo saxashada qofka oo aad u badata oo xataa uu ku saxdo candhuuftiisa
4. Socodka oo uu kari waayo iyo is miisaamidii lugaha oo luma
5. Dhamaan hawlihii gacmuhu qofka u qabanayeen oo luma ama daciifa sida wax ku cunidda, ku labisashada iyo isu daahirintaba marka uu suuliga u baahdo iwm
6. Araga qofka oo haydh-haydh xoog lihi soo galo aadna wax u arki waaya
7. Sindhada iyo kaadida oo labaduba iska socda oo aanu bukaanku maamuli karayn
8. Kabuubyo iyo dareenka oo kaluma qaybta jidhka ee faalijka qabta
9. Xasuusta qofka oo yaraata ama luntaba
10. Suuxdin dhicid ah oo ku timaada qofka
11. Fahmadda qofka oo yaraata
12. Madax xanuun joogto ah dawooyinka dejiyaana aanay haba yaraatee wax ka bedelayn
Hadaba sideen ku ogaanaynaa nooca cudurka maskaxda ee ku keenay qofkan faalijka ?
Waa wax culus waayo cuduradda keenaa waa ay badan
yihiin sida aan kor ku soo sheegnay, waxaase u haboon in marka dhakhtarku garto in bukaankani faalij qabo waa in uu u diro baadhtaanadan sida:
1. Dhiigaga guud ahaan, gaar ahaan xinjirowga dhiiga ,
2. Qalabyadda sawira maskaxda sida:
CT-scanka, MRI-ga iyo kuwa sheega shaqadda maskaxda
sida EEG (electroencephalogram)
Daaweynta Cudurka Faalijka?
Marka haddaba la helo nooca iyo cilladda keentay faalijka
ayaa loo dhaqaaqi karaa daawaynta, Lamana daweeyo uun
calaamadaha kuu muuqada ama ka muuqda qofka bu- kaanka ah ee waxaa dawadu ku jirtaa in la daweeyo cillada iyo sababta keentay,
1. Haddii uu qofku aad u jilicsan yahay isna xukumi karayn waa in la isticmaalaa
a. In oxygen sanka iyo afka laga siiyo,
b. Neefsiga iyo qaadashada hawadda ee qofka oo aad loo ilaaliyo waayo qodobka ugu degdega badan ee dila qofka
c. In tuubada sanka ilaa caloosha la galiyo (NGT) si loogaga quudiyo madaama uusan waxba afka ka qaadanayn amaba ku saxanayo hadii afka laga siiyo
d. In tuubada kaadida la galiyo (Catheter) si looga dhawro in kaadidu dhaafto,
e. In loo xidho maro saxaro qabad ah oo iyana ka ilaalisa in sindhada ka soctaa ay meel aan haboonayn ku gaadho.
f. In tuubada xididada dhiiga (canule) la galiyo si dawooyinka looga siiyo
2. Markaa haday noqoto in aan xinjirta dhiiga ah burburino si aan xididka awdan u furno waxaan isticmaalaynaa dawooyinka la dagaalama xinjirowga dhiiga.
3. Haddii kale qaliin ayay noqonaysaa inagoo ka soo saarayna ama ka soo sifeynayna bukaanka sheyga
Kala Soco Bogga 22aad
a. Dhiiga ku furmay,
c. Shay dibedda ka yimid bir ama dhagax ama laf jab- tay oo cadaadinaysa maskaxda
d. Ama buro iwm
4. Cuduradda dhiig karka , macaanka , dufanka dhiiga , wadne xanuunka iwm waa in si aad ah loo kaantoroolo waayo degdeg ayay kuugu soo celin karaan faalij kale
5. In qofka loo sameeyo jimicsi (physiotherapy) si qu- wadda murqaha ay dib ugu soo kabato
6. In qofka loo sameeyo dib u baridda hadalka (speech therapy)
7. In bukanka niyadda loo dhiso loona sheego in waxani qadar alle yahay ,dulqaad iyo adkaysina yeesho, dadkiis- una ay taakulo la garab joogaan
8. Iyo dhamaan dib in loo dhiso qofka dhinac kasta jidhkiisa iyo noloshiisaba(rehabilitation)
Ma laga dawoobaa?
Haddii marka horeba degdeg loo helo sababta keentay isla markaana lagu degdego dawaynta, waa suura gal in bu-
kankaasi soo kabto, haddiise dib dhac yimaado waxa ay u badan tahay in xubnaha qaar ay waqti dheer ku qaataan bukaanka inay dib shaqdoodii si caadi ah ugu qabtaan
Sidee looga hortegi karaa xaruunka Faalijka?
Maadaama xanuunkani aad u culusyahay dhimasho degdeg ahna keeni karo, walibana 40% dadka uu ku dhacaana ay suura gal tahay inayna dib ugaga kicin. Iyada dheertahay dhimashada, dhaqaale burubur badan oo ka imanaya xagga dawaynta , xagga dhakhtaradda, baylah ku timaada guriga bukaanka, shaqo dambe oo uu shaqaysto bukaanku oon loo rajaynayn xataa hadduu caafimaado,
nolosha qofka ee dambe oo u baahanaysa in loo adeego, si joogto ahna loo takuleeyo (dipedent), waayo isagu ma adeegan karayo. Qodobadaasi dhammaan waxa ay inagu jihaynayaan inaynu xoogeena isugu gayno ka hortagga in faalijba qofka ku dhaco haddaan awoodi karno, gar ahaan dadka u nugul ee qaba cuduradda dhiig karka, macaanka , dufanka dhiiga , dhiig xinjirawga iwm, waxaanan xoog saaraynaa dawayntooda iyo kantaroolkooda Iyo in qofka looga digo dhaqamada horseeda faalijka sida cabidda sigaarka,
cunidda qaadka, buurnaanta, jimicsi la’aanta.
Waxaa iyana haboon in qof kastaba is baadhid caafimaad oo sannadle ah samaysto, hadduuse yeesho dhiig kar ama macaan ama dhiigga oo dufan yeesha waxaa haboon in qofkaasi si joogto ah isu kantroolo dhakhtarka ugu dhow ee uu heli karana joogto ula xidhiidho nolshiisa.
Adeegyadda Cusub ee Sanadkan 2012 Shirkadda Telesom Soo kordhisay
C/Raxmaan Adam, madaxa laanta Suuqgeynta (Marketing) ayaa diyaariyay maqaalkan ka waramaya
Waaxda MPR-ku soo
bandhigeen adeegyo cusub
oo ay ka mid yihiin Adeega
SHAAFI, GMAIL-SMS iyo
Adeegyadaasi waa adeegyo
faa'iidooyin badan u soo
tayadoodana ay aad u soo
Haddaba bal waxaynu eegi
doonaa adeeg kastaaba waxa uu yahay iyo waxa uu
1. Adeega SHAAFI oo ah adeeg la soo bandhigay
bishan June 2012, waa adeeg laga helo doono
dhammaan macluumaadka ku sahabsan
caafimaadka guud, wakhtigan xaadirka ah adeegan
waxaa ku diyaarsan marxaladaha hooyada uurka
lehi marto, sida ogaanshaha xiliga uur-qaadista
hooyada, Cabashooyinka hooya xiliga uurka,
khataraha caafimaad, booqasha xanada,
Calaamadaha khatar ah ee Degdeg dhakhtar loog
baahan yahay, Daawoyinka hooyadu la siin karo,
Noocyada cuntooyina nafaqada leh, Dhiig la'aanta,
xanuunada 3 bilood ee hore, Xanuunada 3 bilood ee
Adeegyadda Cusub ee Sanadkan .........
dhexe, Xanuunada 3 bilood ee danbe, Daryeelka
hooyada xiliga foosha iyo Daryeelka ilmaha
1.1. Qaabka loo isticmaalayo, Garaac 119 ka
dibna dhagaysa codka haga ah waxaa
doorata labarka aad u baahantahay
1.2. Adeegan waxaa laga helayaa Mobile-da
Telesom ee ka diwaangashan CRBT-ga
2. Adeegga TELESOM-GMAIL-SMS Chat waa adeeg
casri ah oo kuu suurtogelinaya in aad emailkaaga
gmailka ah farriimo bilaa lacag ah uga dirto
macmiil sita Moobilka Telesom. Sidoo kale waxa
farriimo toos ah macaamiisha Telesom ugu diri
karaan emailada gmail-ka. Adeegan waxaa iska
kaashaday Shirkadda Telesom iyo shirkadda
Google, waana markii ugu horaysay ee adeegan
laga hirgaliyo dalka.
2.1. Haddi aad leedahay account gmail ah,
fadlan waxaa invite garaysa qofka aad
doonaysid inaad sms kula xidhiidhid
2.2. Ka dib boxe-ka kaa qaban doona dhinaca
midigta ama bixida ee ay ku qoran tahay
Chat and SMS Waxaa ku qortaa labarka
qofka aad u diraysid farriinta adiga oo ka
horaysiinaya ’2’ ka dibna raaci numberka
saaxibkaa, tusaale 24220208.
2.3. Ka dib boxe-ka kuu soo baxa waxaa galisa
magaca qofka aad la xidhiidhaysaa, ka dib
waad u diri kartaa fariimahaaga.
3. Adeega Automatic customer Support waa adeeg
macmiilka u fududaynaya in si automatic ah uu u
helaayo adeegyadan GPRS, PINCODE, PUK,
CALL BACK & CRBT. Adeegan faa'iidooyinkiisa
waxaa ka mid ah: In uu macmiilku kaga maarmo
process-kii dheeraa ee uu soo marayay si uu adee-
gyadan u helo, in macmiilka waqtigiisa loo
ilaaliyo, In culayska laga qaado xafiiska customer
service-ka ee sales-ka iyo In macaamiishu ay adee-
gyadeena si fudud u isticmaali karaan.
3.1. Adeegan marka laguu furo waxaa ku soo
dhacaysa fariin Telesom ah oo u leh
install garee, ka dib save ayaa
taabanaysaa, sidaasi ayuu si automatic ah
kugu shaqaynayaa adeegani.
In aanu noqono horyaalka adeegyada Isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyada casriga ah ee dunida.
Telesom Newsletter: Waa majalad saddex-biloodle ah (Quarterly), oo ay soo saarto shirkadda Isgaadhsiinta ee Telesom, gaar ahaan xafiiska Xidhiidhka dadweynaha (Public Relations office).
Telesom Tower, Bridge Road, Hargeisa Somaliland, Office: +252 2 522168, +252 2 522383 Email: pr@telesom.net, Email: kibaaro@gmail.com Web: www.telesom.net
Documents Similar To Telesom Magazine